Control Tayada - Dongguan Ruizheng Industry Co., Ltd
Waxaan xoogga ah on fahamka caddaymaha iyo shuruudaha tayada macaamiisha, codsiga oo ka mid ah gacanta ku habboon iyo soo saarida qaybta hufan markii ugu horeysay.
Heerka A sare ee tayada waxaa lagu gaarayaa oo lagu hayo by our kaabayaasha xoog leh oo ay ka mid alaabtii qiyaaseed ugu dambeeyey sida Air cabirrada & Qalabka kale qiyaaseed joogto ah taaghayn dhexdiisa. Dhaleen cabirrada, Micrometer, Verniers iwm goobaha Lahaanshaha of CMM, borojektar profile iyo kulan imtixaanka gaarka ah. Waxaa naga go'an inaan Tayada waa xaqiiqada ah in dhammaan warshadaha xiriir sameeyey at Ruizheng qiray Machining waxaa shahaado in ISO 9001: 2000 Iyada oo alaabtii qiyaaseed ugu horumarsan oo nin saanac ahu ugu khibrad leh si ay u siiyaan macaamiisha caalamka ugu hufnaan, ugu dhaqaalaha, iyo ugu sareeya waxyaabaha -quality.
Control Tayada Tallaabooyinka
- Total maamulka Tayada (dabnat)
- Barnaamijka Continuous Improvement
- Barnaamijyada Tababarka Shaqaalaha
- Vertical Midaynta Habsocodsiinta
- Investment in Quality Control Qalabka ka Latest
- Programs Dhiirigelin Tayada
- Ballanqaadka ururku u leeyahay in Tayada
From qaydhiin Waxyaabaha soo socda in waxyaabaha shixnad, waxaan u maareeyaan tallaabo kasta oo habka wax soo saarka si ay u hubiyaan waxyaabaha loo sameeyay in ay ka caddaymaha macaamiisha, Dhammaan alaabta leeyihiin in ay dhex maraan 4 jeegaga in geeddi-socodka oo dhan:
Kormeerka wax cayriin
In kormeerka processing
Shaaca ka qaaday in tayada waa mudnaanta koowaad, iyo hirgelinta ISO9001: 2000, jaango'an nidaamka tayada iyo xasiloonida tayada noo kasbaday kalsoonida macaamiisheena muddo sanado ah. Ruizheng qiray Machining kaa caawin kara inaad hesho tayada sareeya ee qiimaha ugu fiican by-keenidda aad wax soo saarka si ay u Shiinaha.